1832: Colin Archer - injeniera 1795: Gabriel Lamé - mpanao matematika, mpahay fizika, injeniera 1890: Lucien Gamblin - mpilalao baolina kitra, Mpanao gazety 1876: William Harry Evans - injeniera 1889: James Whale - talen-koronantsary, mpanoratra ...
1877: Arthur Werner - mpanao politika, injeniera 1858: Émile Durkheim - filôzôfy, mpahay fiarahamonina 1641: Robert Sibbald - Dokotera, mpahaisiansan-javaboahary 1896 1874: Johannes Stark - mpahay fizika Nikolaï Semionov - mpahay fizika 1869: Emi ...
I Ôseania dia fitambarani Aostralia sy ny nosy anarivony maro manodidina ao aminny faritra atsimonny ranomasimbe Pasifika. Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Manana velarana 8 523 655 km2 eo ny kontinentani Ôseania. Ny 90% nizay dia Aostral ...
Ny laharam-pehintany na laharam-pehy dia fangitra ara-jeografia manome ny fahavaratana na ny fahatsimoana eo aminny velaranny tany, fajiry na velarana mitelorefy. Ny laharam-pehintany faha-0 dia ny fehibe ary ny laharam-pehintany faha-90 dia ny T ...
I Italia dia faritra ara-jeografia ao Eorôpa Atsimo izay manana velarana 324 000 km 2, voafaritry ny tandavan-tendrombohitra Alpa ao avaratra andrefana sy ao avaratra, ary ny Ranomasina Mediteranea no manodidina ny sisa rehetra. Mifanandrify amin ...
Ny isanny mponina dia ny fitambaranny isanny olona Miaina ao aminny faritany iray. Mahazo alalana ofisialy miaina eo aminny faritany iray. Ny olana mahakasika ny isanny mponina dia dinihanny demografia na siansa mahakasika ny mponina. Dinihana am ...
Ny Ganà na Repoblikani Ganà dia firenena any Afrika andrefana ao aminny faritry ny Helodranoni Ginea. Ny firenena manodidina azy dia Kôtidivoara any andrefana, i Borkina Fasô any avaratra ary ny Tôgô any atsinanana. Ny renivohiny dia ny tanàni Ac ...
I Amerika dia anisanny kaontinenta dimy, ny ranomasina mamaritra azy dia ny ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny ranomasimbe Atlantika any atsinanany, ny ranomasimbe Arktika any avarany ary ny ranomasimbe Atsimo any atsimony. Ny faritany tena m ...
Ny fianakaviam-piteny dia vondrom-piteny iray fiaviana izay nivoatra tamin ny alalan ny fampitan ny taranaka mifandimbin ny mpiteny azy avy amin ny razam-piteny iraisana. Ny hoe fianakaviam-piteny dia andian-teny ampitahana ny fivoaran ny fiteny ...
Ny atao hoe rakitra aminny kajimirindra dia firaketana fampahalalana arakisa navondrona tanaty toerana iray ary nomena anarana tokana, ary anaty maharitra toa ny kapila mateza, CD-ROM na bandy arakandriamby. Samihafa ny firafitry ny fampirimana r ...
Ny ampaha dia izay azo avy aminny fizarana. Aminny matematika ny ampaha dia ilazana ny isa azo avy amina fizarana mitovy ka ny isa zaraina dia antsoina hoe mpanisa ny isanny mpizara dia antsoina hoe mpanondro Tsipika marindrano antsoina hoe tsipi ...
Ny siansan olombelona sy ny siansa ara-tsosialy na siansa ara-piara-monina dia vondron-taranja siantifika mandinika ny toetra sosialy sy ny zava-misy aminny olona. Ampififanohirana aminny siansa natoraly sy ny siansa marina ny siansa sosialy. Ny ...
Ny Tantara dia fandinihana ny zava-mitranga, ny zava-bita ary ny zavatra mikasika azy. Ny tantara dia zavatra tantaraina, izy io dia fitaratry ny zava-mitranga efa lasa, ary ny olona mandinika sy mitantara io zavatra io dia lazaina hoe mpahay tan ...
Ny Pew Research Center dia ivontoeram-pikarohana amerikana manome antontanisa sy vaovao ara-tsosialy. Ao Washington no misy ny foiben-toerany ary ny Pew Charitable Trusts no mamatsy vola ny asa ataony. Ny Pew Research Center dia fantatra noho ire ...
Amin’ny biby mampinono, ny fanalan-jaza dia ny fifaranana ny fitondram-bohoka alohan’ny fiterahan’ny zazakely. Afaka tonga ho azy ny fanalan-jaza, matetia noho ny zavatra tsy nety tao amin’ny fitondrana vohoka. Rehefa itranga izany, dia atao hoe ...
Ny 10 desembra 1948 no nolaniana sy nampahafantarinny Fivoriambenny Firenena Mikambana ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zonolombelona. Taorianizany vaninandro manan-tantara izany dia nangataka taminireo firenena mpikambana rehetra ny Fivo ...
Avy aminy Alsimia ny simia. Ny alsimia dia avy any aminy teny arabo الخيمياء Al kemi ; Misy etimolojia roa aminy teny arabo, etimolojia iray aminy teny ejipsianina, dia iray hafa aminy teny grika Araka ny hevitra ejipsiana, ny teny kemi avy any a ...
I Marie Curie teraka taminny anarana Maria Salomea Skłodowska herbu Dołęga ny 7 Novambra 1867 tany Varsôvia, Polonia ankehitriny ary maty ny 4 Jolay 1934 tao aminny sanatôriômani Sancellemoz tao Massy, Haute-Savoie, Frantsa, dia mpanao fizika ary ...
Ny metaly dia zavatra simika mety mampita aratra na hafanana ary mivadi-toetra mba ho lasa katiôna na manao rohy iônika amin ny zavatra tsy metaly. Amin ny simia, ny metaly (avy amin ny teny grika μέταλλον / metallon dia zavatra afaka mitondra ar ...
52.23700°N 21.01467°E ﻿ / 52.23700; 21.01467 Varsôvia fiteny poloney: Warszawa dia renivohitri Polonia, ny isam-poniny dia 1.7 tapitrisa mponina eo ho eo 1 726 581 2014).
Aminny fizika molakiolary sy aminny simia, tenenina hoe miratoerana ny atoma rehefa mitovy ny isanny prôtôna fa tsy ny isanny netirôna. Voatondro aminny isa atomika Z ny isanny prôtôna anatina vaonina. Mitovy isa Z ny miratoerana roa, fa samihafa ...
Ny zavaboary dia tontolo tsy nokasihanny olombelona. Ny teny mifanohitra aminny teny "zavaboary" dia "tontolo namboarina", izany hoe tontolo namboarinny olombelona toy ny saha, ny trano na ny tanàna. Ho anny olona vitsivitsy, misy hasarotana eo a ...
Ny tritium dia miratoeranny hidirôzenina. Ny tritium dia manana prôtôna iray su netirôna roa. Ny mahasamihafa azy aminny deuterium dia ilay radioactivité ananany, mamoaka sandrahaka beta β- izy rehefa mivadika helium 3 He Ny periôdiny dia 12.32 t ...
Aminny taranjanny fizikanny voanjavatra, ny voankazavana dia voanjavatra mety angôvo na zavatra. Izy io dia manana lanja azo tsy raharahiana ary manana vesatra elektrika azo tsy rarahina (noho ny vesany latsaky ny 1.0 -35 e. Ny lazaina hoe spin - ...
Ny ôkzizenina dia zavatra manana lahatra atômika 8 ary manana eva O. Ny lanjanisam-bentin-kadiriny dia 1.429 kg/m 3 Ny ôkzizenina dia 8%-nny lanjanny ranomasina, 46%-nny lanjanny hoditany, 23.1%-nny lanjanny rivotra diôkzizenina, ôzôna. Aminny ha ...
Ny Boky faharoan’ny Tantara na Tantara faharoa dia boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana sady hita koa ao aminny Tanakh, boky masinny jodaisma. Ampahany aminny boky nozaraina roa io boky io, dia ny Bokinny Tantara, ka ny ta ...
Ny Boky voalohanny Tantara na Tantara voalohany dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana sady hita koa ao amin’ny Tanakh, boky masinny jodaisma. Ampahany aminny boky izay nozaraina roa io boky io, dia ny Bokinny Tantara, ...
Ny Bokin’ny Tantara dia horonam-boky na boky ao amin’ny Baiboly jiosy, ka ny fizaràna azy ho roa no niavian’ny Boky voalohanny Tantara sy ny Boky faharoanny Tantara ao amin’ny Baiboly kristiana ankehitriny. Io boky io dia manazava ny antony nizar ...
Ny boky ara-tantara na bokin-tantara dia fitambarana boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly izay mirakitra aminny ankapobeny ny tantaranny Zanaki Isiraely tao aminny tany Kanana hatrany aminny fahababoany tany Babilona. Ireto avy ireo ...
Ny Naturalis Historia, izay azontsika dikaina hoe Tantara Voajanahary aminny fiteny malagasy dia asa soratra izay mirakitra anaty volume 37 nosoratani Pliniosy Ilaibe, izay tia nanangona fampahalalana betsaka indrindra mahakasika ny kolontsaina a ...
Ny Vikram Samvat na Tetiandro Vikramy dia tetiandro ara-tantara hindo, manara-bolana sy masoandro, nampiasaina ao aminny zana-kontinenta indiana. Io no tetiandro ôfisialin i Nepaly. Ampiasaina ao aminny fanjakana maro ao India ity tetiandro ity. ...
Atao hoe Testamenta taloha ny fitambaranny boky ao aminny Baiboly voasoratra talohani Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mampiasa anio teny io hanondroany ny tapany voalohany aminny Baiboly, izay voasoratra talohani Jesoa Kristy sady antsoinny Jiosy ...
Ny teknôlôjia dia fanaovana, fanovàna, fampiasana ary fahalalanny fitaovana, milina, fahaizana, ary fomba firafetana, ho anny famahana olana, fanatsarana ny vahaolana na mahatakatra tanjona. Ny teknôlôjia dia manomboka aminny fampiasana ny zavatr ...
Darrell Long dia injeniera aminny solosaina, teraka taminny 5 Aogositra 1962. Mpampianatra manam-pahaizana malaza izy ary talenny sampana fikarohana momba ny firaketana an-tserasera. Ny tombotsoanny fikarohana ankehitriny eo aminny sehatry ny fit ...
Ny Raharaha Iraisam-pirenena Milina Corporation dia mihazona orinasa voatanisa ao aminny the New York tsenam-pifanakalozan-tsanda. IBM naorina ao aminny fanjakani New York ao 1911. Taminny voalohany, ny orinasa dia antsoina hoe Computing Tabulati ...
Civilization dia kilalao videô nataoni Sid Meier, dia voanontani Microprose. DOS ny interface-ny taminny taona 1991. Ilay mpilalao mitondra sivilizasiona iray ; tsy maintsy entiny avy eo aminny taona ny vato hatrany aminny fizahana ny habaka. Avy ...
Ny haikoriam-boanaratra dia anisanny sampananny siansa, ny injenieria ary ny teknolojia izay mikasika ny olikaratra mampiasa mpiorina arakaratra toy ny tioba termoionika, tirazisitôro, diôda ary olikaratra aharo, izay ampiarahana aminny ireo mpio ...
Ny olika voafintina anaty dia olikaratra nafintina mba hitana anaty velarana kely. Ny mpampita aratra ikorianny rio anatinio olikaratra io dia mpampita tapany, izay vita silisiôma. Ankehitriny dia feno olika voafintina anaty ny fitaovana haikoria ...
Ny solosaina na kompiotera na ordinatera dia milina elektrônika mandeha aminny famakiana tsirairay ny vondrombaiko mampanao azy tao ara-lojika ary aritmetika eo amina isa roa fototra. Ny fampahalalana havadibadika dia azo na aminny famakiana ny t ...
Ny Fanisana dia faritry ny siansa teôrika vita aminny fizohinkevitra lôjika ambonny kaonsepta ohatranny isa, ny endrika, ny rafitra sy ny voatra. Ny fanisana midika koa ny faritra ny fitadiavana mahangeza ny fahaizana. Miavaka aminny siansa afa n ...
Ny Bokinny Nomery na Bokinny Fanisana na Bokinny Fivahiniana izay hafohezina aminny hoe Nomery na Fanisana na Fivahiniana dia boky fahefatra ao aminny Baiboly izay manohy ny tantara ao aminny Eksodosy momba ny fivezivezenny Israelita tao an-tany ...
I Eoklida izay niaina taminny taonjato fahatelo talohani JK, dia mpanao matematika grika taloha izay lazaina fa rainny jeômetria ary izay malaza aminny algôritma noforoniny.
Ny Aljebra dia rantsanny Matematika mandinika ny tao sy fanorenana sy ny konsepta avy aminy, toy ny maromiantoana, fampirimana sy rafitra aljebrika. Miaraka aminny jeômetria, ny fandinihana, ny anatoerana, ny fangaro ary ny teorianny isa, ny alje ...
Ny famoaham-peo dia zavatra ampiasaina mba hamadika ny kaika elektrika ho feo aminny alalanny hovitrovitry ny fono vokatry ny hovitrovitry ny antsody mipetaka aminy. Ny hovitrovitry ny famoaham-peo dia avy aminny andriamby sy ny antsody mifanakai ...
Ny isa Pi, soratana aminny litera grika π, dia mpanohatra mitovy sanda aminny savaivo sy aminny refim-paribolana. Ny sandanny isa π​​ dia boriborina ho 3.14 na 3.141.
Ny dimilafy dia karazana endrika iray manana lafy dimy. Antsoina hoe dimimira izay dimilafy manana lafy dimy mitovy halava.